एकैदिन ५३५ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति नयाँ संक्रमित ? – GoldenKhabar.com
एकैदिन ५३५ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति नयाँ संक्रमित ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ५३५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । सोमबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ५३५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए । जसमध्ये ४६१ पुरुष र ७४ जना महिला रहेका छन् ।